Kufuneka Ufunde NgoThixo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISidama ISpanish Intetho Yezandla YaseCuba Intetho Yezandla YaseGhana Intetho Yezandla YaseMozambic Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseCosta Rica Intetho Yezandla yaseCroatia Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseDatshi Intetho Yezandla yaseFilipi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseGrisi Intetho Yezandla yaseGuatemala Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseNew Zealand Intetho Yezandla yaseNorway Intetho Yezandla yaseOstriya Intetho Yezandla yasePanama Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseRomaniya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseSweden Intetho Yezandla yaseThai Intetho Yezandla yaseTshayina Isi-Iban Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAbkhaz IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAukan IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBaoule IsiBassa (SaseLiberia) IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseSimalungun) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiCambodia IsiCarib IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiDouala IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrafra IsiFrentshi IsiFutuna (SaseMpuma) IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHmong (White) IsiHungary IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKisi IsiKorea IsiKrio IsiKwanyama IsiLaotia IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMalagasy IsiMapudungun IsiMbunda IsiMedumba IsiMizo IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNavajo IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNengone IsiNepali IsiNgesi IsiNias IsiNiuea IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiRomany (SaseNorthern Greece) IsiRomany (SaseSouthern Greece) IsiRunyankore IsiRutoro IsiSarnami IsiSerbia IsiShona IsiShuar IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTojolabal IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUzbek IsiUzbek (NgesiRoman) IsiVenda IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isiWallisian
Ukuze ube ngumhlobo kaThixo, kufuneka ufunde ngaye. Ngaba abahlobo bakho bayalazi igama lakho yaye bakubiza ngalo? Ewe kunjalo. UThixo ufuna ukuba ulazi igama lakhe uze umbize ngalo. Igama likaThixo nguYehova. (INdumiso 83:18; Mateyu 6:9) Ukwafanele ufunde nezinto azithandayo nangazithandiyo. Kufuneka wazi ukuba ngoobani abahlobo bakhe yaye ngoobani iintshaba zakhe. Kuthabatha ithuba ukuze umazi umntu othile. IBhayibhile ithi kububulumko ukuzibekela bucala ixesha uze ufunde ngoYehova.​—Efese 5:15, 16.
Abahlobo bakaThixo benza oko kumkholisayo. Cinga ngabahlobo bakho. Ukuba ubaphatha kakubi uze wenze izinto abangazithandiyo, ngaba baya kuqhubeka bengabahlobo bakho? Enyanisweni akunjalo! Ngokufanayo, ukuba ufuna ukuba ngumhlobo kaThixo, kufuneka wenze oko kumkholisayo.​—Yohane 4:24.
Asizizo zonke iinkonzo ezikhokelela kubuhlobo noThixo. UYesu, oyena mhlobo kaThixo osenyongweni, wathetha ngeendlela ezimbini. Enye indlela iphangalele yaye izele ngabantu. Loo ndlela ikhokelela entshabalalweni. Enye indlela imxinwa yaye bambalwa abahamba ngayo. Loo ndlela isa ebomini obungunaphakade. Oku kuthetha ukuba, ukuba ufuna ubuhlobo noThixo, kufuneka ufunde indlela echanileyo yokumnqula.​—Mateyu 7:13, 14.